kufanele ngisebenzisa kanjani imithi "Antral"? Yokusetshenziswa zomuthi kuchaziwe ngezansi. Futhi, ukunaka kwakho uzokwaziswa ngabakushoyo, iziguli kanye nodokotela wemoto wathi, kungakhathaliseki unawo analogue, yini izindawo nakhona, nokunye. D.
Ukwakheka, ukuma, incazelo kanye emaphaketheni
wenza umuthi "Antral" ngayiphi indlela? Yokusetshenziswa uthi lokhu ukulungiselela kukhicite amaphilisi amnyama obomvu round namafomu biconvex. Isithako asebenzayo we umuthi Antral. Futhi kule nomuthi zihlanganisa izithako adjunct njengoba amazambane isitashi, talc, microcrystalline cellulose, polysorbate, polyvinyl utshwala, povidone, ama-titanium dioxide, i-magnesium carbonate, polyethylene glycol, crospovidone, lecithin, colloidal Silica anhydrous, E122, E171, E172, E132 futhi stearate i-calcium.
Ngo ukudayiswa izidakamizwa iza ibhamuza amaphakethe, okuyinto ezibekwe amabhokisi leyakhiwe ngemabhokisi.
Kanjani lesi sidakamizwa "Antral"? Yokusetshenziswa ibika ukuthi gepatoprotektor. Isetshenziselwa nokuvimbela isibindi sibe sesomile kanye ne-hepatitis zasezindaweni ezihlukahlukene. Futhi aqede izimpawu imithi ukuqunjelwa kanye astenovegetativnogo syndrome, normalizes ukulala futhi isifiso sokudla.
Ukuphatha isikhathi eside-ejenti kuncike kunciphisa umsebenzi enzyme of aspartate aminotransferase futhi alanine aminotransferase, kunciphisa lizinga bilirubin egazini. Kufanele futhi wazi ukuthi ngesikhatsi ukwelashwa nale imithi iza prothrombin Inkomba evamile, futhi okuqukethwe gamma-globulin.
Izidakamizwa "Antral" has a eside anti-inflammatory, analgesic kanye nomthelela immunomodulating. Ngaphezu kwalokho, imfuyo esebenzayo ye-ejenti uyakwazi ukunciphisa izinga lokushisa komzimba.
Ukuthola lokhu imithi ikhuthaza nokubuyiselwa amaseli isibindi. Ukuchayeka ezintweni ezinobuthi ezihlukahlukene emzimbeni abahlukene encishisiwe. Futhi isebenze antioxidant umsebenzi ohlelweni.
Nomuthi "Antral", ukubuyekezwa zazo kukhonjisiwe ngezansi, akusho buthelela emzimbeni. Akukona obungamcasula wamathumbu and emphinjeni akanayo nomthelela izinqubo mzimba.
Ngenxa enteric enamathela esiphezulu lokuhlushwa isithako esisebenzayo kufinyelelwa ngemuva kwamahora 3.5. Bheke of nomuthi kusukela umzimba yenziwa ngokusebenzisa ipheshana wokugaya ukudla bese uhlelo urinary (amahora 5).
Lapho prescribers "Antral"? Tablets kumele kuthathwe kulezi zimo ezilandelayo:
ngoba impatho enobuthi, acute viral, nomzimba, izidakamizwa kanye ne-hepatitis utshwala ;
isibindi sibe sesomile;
ekwelapheni isifo sokusha kwesibindi kohlobo ezingamahlalakhona;
nge okunamafutha isibindi ;
ukwelapha inflammations kwezitho emathunjini;
ngokuba prophylaxis, ngelashwa nangemithi imisebe;
ngemva acute ukusha kwesibindi kohlobo ezibangelwa amagciwane.
Kungaphansi kwaziphi izimo akumele sithathe lesi sidakamizwa "Antral"? Uphenyo odokotela libike ukuthi izidakamizwa is contraindicated ku:
abantu ukusabela iguliswa yezingxenye izidakamizwa;
izifo kwezinso, kuhlanganise zokunciphisa umthamo wabo excretory;
izingane, ongaphansi kweminyaka engu-iminyaka emine.
Nomuthi "Antral": yokusetshenziswa
Ngokusho imiyalelo, bebheka bonke izidakamizwa kumele ezithathwe umlomo emva kokudla.
Ngaphambi ukwelashwa liyadingeka qiniseka bonana nodokotela wakho kuqala. Ubude yokwelashwa kanye umthamo nsuku zonke zomuthi kufanele azimisele kuphela i uchwepheshe abanolwazi.
Njengoba ukuphuza "Antral" ithebhulethi? Lapho hepatic isifo sokusha le nomuthi iqondiswa iziguli omdala e isamba 1.2 g ngelanga (e ngesonto lokuqala ukwelashwa). Ngemva kwezinsuku ezingu-7 izidakamizwa Kunconywa ukuthatha 0.6 g ngelanga (amaviki 2-3). Wathi umthamo wansuku zonke kumele ukusatshalaliswa izikhathi 3.
Eyenzelwe izingane ezineminyaka engu eminyakeni 4-10, nge uphethwe esifanayo linqume ku 0.3 g zomuthi ngosuku.
Lapho ezinye izifo izidakamizwa ukunikeza ingane (iminyaka 4-10) kanye 0.3 amagremu ngosuku. Abantu abadala kanye nezingane ezingaphezu kwezingu-10 ubudala kufanele uthathe 0.6 amagremu zomuthi ngosuku.
Inkambo yokwelapha ithuluzi ezifana kuyinto 3-4 amasonto. Ngemva kwenyanga, ukuchitha ukuyiphuza amaphilisi futhi.
Ochwepheshe bathi izidakamizwa kubhekwe is kahle ikubekezelele iziguli. ukusabela ezingezinhle ngokumelene okwenza ukusetshenziswa zalo zivele kakhulu kuyaqabukela. Nokho, abantu besebenzisa leli thuluzi usengakwazi sibhekana nemiphumela ezilandelayo enqabayo:
isicanucanu, ubuthakathaka, ukuqunjelwa, komzimba, ubuhlungu besisu;
nokulahlekelwa ukwazi, uhudo, ukuqubuka komzimba, isiyezi;
ukuqubuka futhi ukulunywa esikhumbeni.
Ngemva ukukhansela zonke zomuthi ohlangothini ukusabela kufanele zinyamalale ngokuphelele.
amacala ukweqisa izidakamizwa
Lapho amazinga okukhishwa enkulu imithi isiguli bangezwa okhushuliwe ohlangothini ukusabela. Kulokhu, ufuna iphume esiswini futhi ukukhiqiza ukwelashwa lingaze.
Okubukwe ekwakhiweni iyahambisana ejenti elwa namagciwane kanye choleretic, kanye ngokukhishwa kobuthi egazini ejenti namavithamini.
Inhlanganisela amaphilisi "Antral" cytostatics futhi ama akuphazamisi ukusebenza kahle lakamuva.
Lapho ethola nomuthi kubhekwe efiselekayo ukunciphisa umthamo ngama-corticosteroid esetshenziselwa 50 noma u-70%. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukwehla ukuphumelela ukwelashwa ngeke saphawula.
Izinto ukwazi ngaphambi ukuthatha amaphilisi "Antral"? Izibuyekezo babike ukuthi imithi kumele kusetshenziswe imizuzu kuphela emva 30 ngemuva kokudla, wageza phansi ngamanzi noma ubisi.
Phakathi umshayeli ukulawula komgwaqo kokuthatha lesi imithi, kuyadingeka ukuba acabangele ematfuba nesenzakalo kobuthongo isiyezi.
Ngo imiyalelo exhunywe izidakamizwa kuthiwa lesi sidakamizwa "Antral" akufanele sithathwe kwabesifazane abakhulelwe. Futhi, ke akumele zisetshenziswe ngesikhathi ibele, ngoba asebenzayo izidakamizwa izidakamizwa ingena obisini lukamama.
Analogs futhi intengo
Ingabe uyazi ukuthi yini ungakwazi ukushintsha izidakamizwa "Antral"? Analogs yalesi izidakamizwa nomphumela ofanayo zokwelapha. Lezi zinto zihlanganisa indlela esilandelayo: "Galstena", "Enerliv", "heptoxy", "Essentiale N", "Glutargin", "Ornitoks", "Glutarsol" izithelo ubisi somkhaya, "Darcy," "Gepaforte", "Larnamin" "Hepa-Merz", "Karsil", "Legalon", "Lesfal".
Njengoba ngentengo kubhekwe izidakamizwa, akusiyo eliphezulu kakhulu. ERussia, ithebhulethi "Antral" in inani izingcezu 30 angathengwa ruble 240-260.
Ukubuyekezwa "Antral" ukulungiselela ngokuyisisekelo okuhle. Lokhu kusho pretty masinyane ubuyisela isibindi. Umthelela ekuphathweni, ikakhulukazi liphinyiselwe uma isiguli ngesikhathi esifanayo athobele Ukudla, futhi ulandela yonke izincomo udokotela. Abantu abaningi sengathi ifomu elula kwezidakamizwa ukukhululwa.
Ezimweni ezingavamile, iziguli esekhala engemihle. Ngo kusaqalwa impatho ubuhlungu wande.
Ngokuqondene odokotela, bakhuluma ngalokhu thuluzi kuyadida. Ochwepheshe bathi sidakamizwa sisiza kuphela ngesikhathi abaphathi okungamahlalakhona, futhi uma isifo umnene.
"Viprosal": izinkomba ukusetshenziswa, nozakwabo yangempela
"Ibrans" (palbotsiklib): the nozakwabo intengo. Lapho ukuthenga Ibrans eshibhile?
Izindlela eziphumelelayo ukhunta: nezinhlamvu, imithetho kanye nokubuyekeza isicelo. "Nogtivit" - amafutha ezingasiza
Immunomodulators ngoba izingane: ngebuhle nebubi
"Vartoks" - ukhilimu-unamathisele ukususa warts. "Vartoks": yokusetshenziswa, ngempela
Umqondo futhi umlando noveli "Futhi epholile Flows Don"
Haircut "Gavroche" - ukubukeka zabuna entsha
Pedagogical credo uthisha. credo Pedagogical we uthisha ekilasini
Indlela ukudala futhi kanjani ukuvula imbobo "Maynkraft"
Clash of kwamaqembu: Ukubekwa Th5
Izimpahla sokuzilibazisa asebenzayo
Esiko Thriller "Point Break": abalingisi, adlulisele yonke ngemizwelo yabantu ehlukahlukene. Ukuqhathanisa ne 2015 Remake
"Bifidum BUG": ukubuyekezwa. "Bifidum BAG" ketshezi: yokusetshenziswa